downloads 11 259
Obere Soviet aerobatic ụgbọelu maka arụmọrụ! The graphic àgwà nke nlereanya na-akarị nke ahụ dị mfe "freeware" dị ka mgbe anyị na nhọrọ na o kwesịrị nnọọ akwụ ụgwọ.
-Agụnye abụọ textures "Ferrari" na "Mclaren" dara reflections na kpọmkwem ụda maka nke a nlereanya. A detailled virtual kokpiiti (VC) ga-eme ka i nwee obi ụtọ.
The Sukhoi Su-26 bụ otu-seater aerobatics ụgbọelu ebe bụbu Soviet Union, kwadoro site na otu radial reciprocating engine. The Su-26 nwere ufọt ufọt ndokwasa ogologo nku na ofu ọdịda gia, isi gia ndokwasa on a siri ike titanium aak.
The Sukhoi Su-26 mere ya mbụ ụgbọ elu na June 1984, mbụ anọ enwe a abụọ-bladed prop. The mmepụta gbanwere ma na Su-26M, na nụchara anụcha ọdụ na-ebupụta na a 3-bladed Hoffman prop. Ọzọkwa gbanwerela e mere, na ihe nlereanya merie ma ndị ikom si na ndị inyom na otu nwa anụmanụ na 1986 World Aerobatics n'asọmpi. The gbanwetụrụ Su-26M3 ọhụrụ M9F 430-HP engine adịkwaghị na 2003 na 2005 Aerobatic World n'asọmpi nakwa dị ka 2004 European n'asọmpi. Ọ na-e exported ka Argentina na 1990s.
isi iyi wikipedia
Onye edemede: Amaghi :-(